Bahrain: Aiza i Ali Abdulemam? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2012 10:30 GMT
Koa satria manopy maso isan'andro ny hafatra sy fanamarihana ao amin'ny pejiko Facebook aho, dia manopy maso koa ny mombamomba an'i Ali Abdelemam. Isanandro dia manontany tena aho raha misy lahatsoratra avy any aminy. Isan'andro dia manopy ny masoko aho amin'ny rindriny mba hijery izay lahatsoratra sy sary avy amin'ny fianakaviany, ary manantena farafaharatsiny mba afaka mahalala zava-bitika mikasika azy. Manontany ireo namana sy mpiara-mifarimbona amiko ao Bahrain mikasika an'i Ali aho, ary dia tsy misy mahalala izay niafarany ny olona. Manontany tena aho hoe mba aiza izao i Ali amin'izao fotoana. Ali, raim-pianakaviana niteraka telo, nanjavona ary namela antsika haminany izay niafarany. Inona no antony nanjavonany?
Tsy nahalala velively an'i Ali aho (noho ny havendranako). Izy dia mpiady mangina ho an'ny fahalalahana izay mety ho niasa mafy tokoa nefa tsy nidehadehaka nandrenesam-peo. Indray andro, naharay fangatahana ho namana aho avy amin'i Ali. Nekeko ny fangatahany, ary dia nanomboka nanaraka ny zavatra nalefany aho. Tsy dia niraika loatra tamin'ny asa mafy ho fiarovana ny maha-olona sy ny rariny ara-tsosialy nataony tao Bahrain aho. Tamin'ny Aogositra 2010 izy no nandefa io fangatahana io tamiko. Ny 4 Septambra 2010, dia tohina tokoa aho nandre fa hoe voasambotra i Ali.
Fa naninona i Ali no voasambotra?
Tahaka ny fitondrana iray tsy refesi-mandidy ihany, ny fitondra-mpanjaka ao Bahrain dia mikendry ny hampangiana izay feo rehetra manohitra ary tafiditra anatin'izany ny bilaogera izay ny hany helony dia ny mampita ny zava-misy araka izay hitany. Tsy ndeha hanoratra mikasika ny asan'i Ali aho akory, satria efa maro amin'ireo mpamaky ny Global Voices rahateo no mahalala azy amin'ny alalan'ny lahatsorany. Izy no nanangana ny “Bahrain Forum” na “Multaqa Al Bahrain.” Bilaogera Bahraini ihany koa izy. Ho ahy, ny mibilaogy anaty toerana iray tahaka an'i Bahrain dia toy ny mitolona anaty ady iray izay efa fantatrao sahady fa tsy maintsy ho resy ianao. Ho anà mpiady iray mahery fo anefa, ny tena zava-dehibe indrindra dia ny dindo avelany ho an'ny aoriany, fa tsy ny hibata fandresena amin'ilay ady
Tsy nahatampina ny vavan'i Ali ny fanibohana azy tanaty efitrano famonjàna tao Barhain. Tsy misy na iza na iza afaka ny hanakana ireo mpanoratra na ireo bilaogera tsy hiteny ny marina ety amin'ny habaky ny aterineto. Raha toa voasambotra i Ali, dia ho izahay indray no hanoratra mikasika azy, ary noho izany dia tsy ho faty velively ny tantarany. Na izany aza, faran'izay henjana izany hoe voasambotra noho ny nanoratanao monja mikasika ny toe-javatra misy eo amin'ny firenen'ny tena izany. Ho an'ny mpanoratra iray, ny fanagiazana ny zo ho afaka hiteny malalaka dia tahaka ny fanesorana ny ainy
Ny 14 Febroary 2011, dia nirary aho ny haha-eo an'i Ali. Nosainiko izay mety ho nosoratan'i Ali teo amin'ny rindriny ao amin'ny facebook. Noforoniko tao an-tsaiko mihitsy aza ny lahatsoratr'i Ali momba ny revolisiona Bahraini. Tsy ampy herinandro iray taty aorian'ny fihanahan'ny hetsi-panoherana, nafahana i Ali ny 23 Febroary taorian'ny namoahan'ny mpanjaka Bahraini didy hamotsorana ireo mafàna fo maro ka isan'ireny izy
Ravo aho. Nihevitra aho fa ho afaka mamaky ny lahatsoratr'i Ali ihany nony farany. Nahazo toky aho fa ho maro no zavatra hambaran'i Ali mikasika ny hetsi-panoherana sy ny famoretana an-kerisetra ireo olon-tsotra tsy manan-tsiny. Nihevitra aho fa hanan-karena amin'ny zavatra azo haroso ho an'ny bilaoginy i Ali amin'ny fahalalana fa ireo vahoaka aty Afovoany Atsinanana dia miady mafy ho an'ny zon'izy ireo
Maty indray ilay haravoako. Fotoana fohy taorian'ny namotsorana azy, nanjavona indray i Ali. Tsy misy mahalala izay toerana misy an'i Ali ny olona amin'izao fotoana, eny fa na dia ny fianakaviany aza na ireo namany akaiky indrindra. Ny hany zavatra fantatsika mikasika an'i Ali dia nohelohin'ny fitsarana miaramila hifonja 15 taona an-tranomaizina taminà fitsarana tsy natrehany akory i Ali. Nahoana i Ali no nanjavona? Nahoana i Ali no miatrika sazy henjana toy izao? Ny valiny tokana ananako dia hoe : manana izay mampiavaka azy ny zavatra ambarany ary ny hafanam-pony ety anivon'ny aterineto dia mampangovitra ny fitondràna izay manosihosy ny zon'olombelona.
Raha mamaky ny lahatsoratro izao i Ali, tiako ho fantany fa tsy hangiana velively ny feony. Raha izy no tsy afaka mizara ny asa sorany ankehitriny, ireo lahatsorany fahiny tao amin'ny bilaoginy kosa sy ireo asa sorany rehetra dia mbola hanakoako manerana ny tontolon'ireo mafàna fo ety anivon'ny aterineto. Izy no tena ilay Ray Mpiahy ny fitorahana bilaogin'ny Arabo